Takura pane Blogs | Martech Zone
Chitatu, July 5, 2006 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
News.com - Takura paBlog
Forbes.com - Iyo MySpace Bubble
Iwo akati wandei anonakidza manotsi pane kuputika kwemablog. Sezvo nechero 'bubble', vanhu vari kutotaura nezve 'kuputika'. Zvangu zvandinotora ndezvekuti Nick Denton haasi kuwana 'bearish pamablog', ari kuwana bearish pamablogi akashata senzvimbo yemari. Blogs dzichaenderera mberi dzichikura nekufamba kwenguva uye dzichipinda muzvinhu zvese zvewebhu. Zvisinei, sekune chero webhusaiti, zvemukati zvinofanirwa kuve mambo. Kana usiri kunyora zvirinani pane anotevera mukomana, vanhu vanozofinhwa vobva vaenda.
Kune makambani akaita saVaDenton avo vari kushandisa mablogi sosi yemari, izvi zvinoreva kuti yega yega blog inopinda inoda kuva mhondi. Pane njodzi huru inobatanidzwa mukubhejera mari yezvinyorwa - kunyanya kana paine mabhiriyoni emapeji ezvinyorwa kunze uko.
Ini handisi blog yemari (ini handidi kudya kana ndikadaro). Pane kudaro, ini ndinonyora kuti nditaure neshamwari, mhuri, uye vamwe vashandi vemabhizimisi. Ino inzvimbo yekuti ndigovane zvandinofunga uye nekukurukura pfungwa dzevamwe. Iyo inondipa ini nekuratidzwa uye kukumbira mhinduro kubva kune avo vandinoremekedza.
Tags: bearish pamablogBlogBloggingForbesNzvimbo yanguNick dentoniyo myspace bubble